तीज संस्कृति कि विकृति ? – News Portal
August 27, 2019 epradeshLeaveaComment on तीज संस्कृति कि विकृति ?
आधुनिक समाजमा तीजको महत्वलाई जुनरूपले व्याख्या गरिए पनि यो एक पौराणिक कालदेखि चलिआएको परम्परा र पर्व हो । सृष्टि र समाज चल्नको लागि पूर्वीय मान्यता अनुसार महिलाहरू विवाहपश्चात् आफ्नो श्रीमानको साथमा उसको घरमा बसी बाँकी जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी आफू जन्मेको घर, माता, पिता, भाइबहिनी, इष्टमित्र र समाज चटक्क छोडी पराई घरमा जीवन बिताउँदा आउने माइतीको यादलाई कमी गर्ने एउटा अवसरको रूपमा तीज पर्वको गहन महत्व रहेको छ ।
तीजमा महिलाहरूलाई मीठा–मीठा भोजनका परिकारहरू खुवाइन्छ, नयाँ लुगा कपडा दिइन्छ । महिलाहरूलाई पराई घरको विभिन्न जिम्मेवारी, तनाव, साथै माइतीको सम्झनाको खाडललाई कम गर्न यो पर्वको ठूलो भूमिका रहेको छ ।
तीजमा विवाहिता महिलाहरू आफ्नो पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै ब्रत बसी नाचगान र मनोरञ्जन गर्छन् भने अविवाहिता सुयोग्य वरको आशा राखी ब्रत बस्छन् । ब्रतको समयमा महिलाहरूले तीजको ब्रतकथा सुन्ने र समापनमा पूजा लगाई दान दक्षिणा गर्ने चलन रहेको छ ।
तीजको ब्रत अन्य ब्रतभन्दा फरक ढंगले लिइन्छ । छोरी, चेली र माइतीबीचको सम्बन्धलाई पुनर्मिलन गराउने, साथी, सङ्गीबीचको सम्वन्ध पुनर्मिलन गराउने पर्वका रुपमा तीजलाई लिन सकिन्छ ।
विवाह गरेर कर्म घर गएका सबै छोरीचेलीहरु जन्म घरमा आउने जन्मथलोसँगको पुनर्मिलन आफू जन्मी हुर्की बढेको ठाउँ, घास, दाउरा, पाखापखेरा गरेको डाँडाकाँडा, उकाली ओराली गरेर हिडेका बाटाघाटा, थकाई मारेका चौतारा,
खोलानाला साथीसङ्गी सबैसँग पुनर्मिलन गराउने र बालापनमा पुनः फर्काउँदै जीवनमा आएका उतारचढावलाई विश्लेषण गर्दै एकैछिन भएपनि रमाईलो आभाष गराउने पर्वको रुपमा तीजलाई लिइन्छ ।
पछिल्लो समय तीज पर्व केही भड्किलो बन्दै गएको पनि छ तर यसको लागि हामी आफैपनि सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो क्षमताअनुसार नै तीज पर्वलाई भव्य र सभ्यरुपमा मनाउने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ ।
समय परिवर्तनशील र गतिशील छ । समयको परिवर्तनशीलता र गतिशीलता सँगसँगै मानव समाज र सभ्यताहरूको परिवर्तन हुँदै आएका छन् । समयको गतिसँगै भएका सकारात्मक एवं सिर्जनशील परिवर्तनहरूले समाज र सभ्यताहरूलाई विकासको उचाईमा पु¥याएका छन् ।
तीज पर्वका बारेमा विभिन्न विकृति भित्रिन थालेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । वर्षौदेखि चलिआएको रितिरिवाज, परम्परा र संस्कारलाई हामीले परिवर्तन गर्नुहुँदैन् । किनभने रितिरिवाज र संस्कार संस्कृति हाम्रा सम्पत्ति हुन् ।
हामीले तीज पर्वमा गर्ने फजुल खर्चको कटौती गरेर अरु कुनै पनि काममा लगाउन सक्छौँ । आफ्नो क्षमताले धान्ने गरी तीज पर्वलाई मनाउनुपर्छ ।
समयको बदलिदो प्रवाह सँगसँगै नकारात्मक र सिर्जनशील परिवर्तनहरूले हाम्रो समाज र सभ्यताहरूलाई बदनाम गर्ने गरेको छ । त्यसैले यस्ता कुराहरुको पाठ आजैबाट सिकेर जानुपर्ने देखिन्छ । र अन्त्यमा तीजपर्वको सबै दिदीबहिनीलाई शुभकामना ।